Adhi - Wikipedia
Nnoc ka mid ah naasleyda.
Adhi sidoo kale loo yaqaano Ari ( Af-Laatiin iyo Taliyaani: capra ) waa xoolo gurijoog ah oo dadku dhaqdaan. Adhigu waa xoolo naasley ah, kuwaas oo ubucda hoose ku leh labo naasood oo laga helo caano.
Adhiga waxa uu u kala baxa Riyo Iyo Ido. Riyaha kiisa lab waxaa loo yaqaanaa orgi, halka mida dhedig lagu magacaabo ri'. Idaha kiisa lab waxa loo yaqaan wan kiss dheddigna waxa loo yaqabaan lax. Riyuhu marka ay yaryar yihiin labka waxaa loo yaqaanaa waxar, mida dhedigna waa waxar ama orgi. Idaha kooda yar ee dheddig waxa la yidhaahdaa Nayl, kooda labna Nayl (waa isku dhigid kala dhihid).
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Capra.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Adhi&oldid=210438"
Last edited on 19 Maarso 2021, at 22:39
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Maarso 2021, marka ee eheed 22:39.